येशूको फिर्ती - मानवता गरेको मात्र मुक्ति | Apg29
येशूको सबै 300 शब्द 'पहिलो हुदै पूरा भएपछि, गर्
हामी कहाँ प्रकृति आफ्नो चेतावनी बाहिर कल जलवायु संकट, संग, यो को सुरुमा अब? यस्तो एड्स, Saar, इबोला रूपमा त्यहाँ महामारी र झन् सम्पूर्ण विश्व पंगु बना जो अहिले Corona भाइरस! अब एक वित्तीय संकट, पहिले नै 2008 संकट, महामारी Entourage surpasses जो!
जब येशूको आ पहिलो उहाँको दोस्रो लगभग आउँदै 556 पटक भनिएको रूपमा बाइबल मा 300 पटक उल्लेख गरिएको छ। येशूको सबै 300 शब्द 'पहिलो हुदै पूरा भएपछि, गर्नुपर्छ भन्ने होइन उहाँको फिर्ती ले स्थान बारे सबै भविष्यवाणीहरू?
"एक पटक, दोस्रो पटक पाप बिना धेरै पापको वहन गर्न बलिदान गर्ने त्यसैले, ख्रीष्टको उहाँलाई पर्खिरहेका छन् गर्नेहरूलाई देखिने।" Heb.9: 28
2000 साल मा, यो सोच छ: समय वर्ण येशूले फिर्ती गर्नेछन्, र, त्यो पूरा दिंदा? मुख्य चरित्र, 1948 मा इजरायल छ आफ्नो देश, आफ्नो भाषा पुनःप्राप्त, Assimilation को वर्ष भए तापनि आफ्नो संस्कृति कायम कि पुनःप्राप्त: परमेश्वरको एक चमत्कार!
Luk.21 मा येशूले परमेश्वरको राज्य नजिकै छ भनेर गर्मी चिन्ह रूपमा, नेभाराको रूख, इस्राएलका प्रतीक बारेमा कुरा। मत्ती 24 मा येशूले यसो भन्नुभयो:
र यो सुसमाचार सबै जातिहरूलाई गवाही रूपमा प्रचार गरिनेछ: त्यसपछि अन्त हुनेछ!
आज यो बाइबल 90% कवर, 2300 भाषाहरु र बोलियों अनुवाद छ, र अहिले फिर्ता इस्राएललाई आएको छ भने छ।
येशूले युद्ध, अनिकाल, महामारी, भूकम्प, परमेश्वरको राज्यको जन्म दुखाइ को बस शुरुवात आउँदै छ भने! उहाँले संसारको सुरुदेखि भएको छैन कि कठिनाइ बारेमा कुरा गर्न जारी, र कहिल्यै हुनेछ।
येशूले अन्त बताइएको गर्दा उहाँले अन्त को तस्वीर रूपमा नूहको बाढी र सदोम विनाश लाग्छ। "यो नूहको दिन थियो रूपमा, तिनीहरूले पिए खाए, विवाह दिन नूह जहाज प्रवेश सम्म। त्यसपछि बाढी आयो र तिनीहरूलाई सबै नष्ट!"
"यो लट, को åt.dack को दिन थियो रूपमा, किनेको र बेच, रोपे र बनाए। तर मा दिन लट सदोम बाहिर गए यो स्वर्गबाट ​​आगो र brimstone rained र ती सबै नष्ट गरे। यस्तै, यो दिन मानिसको पुत्र हुनेछ प्रकट! " Lk.17: 26-30।
परमेश्वरको यसको भाग्य मानिसजाति गर्नुभएको छ? होइन, उहाँले आफ्ना मान्छे को लागि एक उद्धार योजना छ!
क्रोध आउन अघि परमेश्वरले नूह र लट दुवै परिवार सुरक्षित कि सम्झना! मत्ती 24: 31, 40-41, येशूले परमेश्वरको इच्छा र उहाँको सहायता र उद्धार प्राप्त गर्न चाहने सबै मदत सिकाउँछ।
तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, यो येशू संसारको मुक्तिदाता विश्वास बारेमा। एक बाहिरी धर्म संग छैन Suffice, तर येशूले को हृदय व्यक्तिगत सम्बन्ध ठाउँ लिन अनिवार्य छ।
पापको बाटो बाट बारी र भित्रबाट तपाईं परिवर्तन क्षमा गरौं र हृदयको एक रूपान्तरण,! परमेश्वरको वचन यसो भन्छ:
"अनि यो प्रभु सुरक्षित गरिनेछ को नाम पुकार्ने भनेर सबैलाई पास आउन पर्छ!" प्रेरित 2: 21
येशू क्रूसमा मृत्यु तपाईं प्रेम र सदाको लागि सुरक्षित गर्न चाहन्छ!